GIMP 2.99.2 yakaburitswa, kuongorora kweGIMP 3.0 | Linux Vakapindwa muropa
Yakaburitswa GIMP 2.99.2, preview yeGIMP 3.0
Munguva pfupi yapfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yeGIMP 2.99.2 yakaunzwa, mairi zvinofungidzirwa kuyedza mashandiro ebazi idzva rakatsiga rebazi reGIMP 3.0.
Mubazi idzva, yakachinjirwa kuGTK3, yakawedzera yakajairwa rutsigiro rweWayland neHiDPI, kodhi yekodhi yakacheneswa zvakanyanya, API nyowani yekuvandudza plugin yakataurwa.
Kuwedzera kune caching yakaitwa, rutsigiro rwekusarudza akati wandei matse (akawanda-masarufa kusarudzwa) akawedzerwa uye kugadzirisa mune yekutanga ruvara nzvimbo yakapihwa.
1 GIMP 2.99.2 Kiyi Nyowani Zvimiro (GIMP 3.0 Ongorora)
1.1 Dhawunirodha uye isa
GIMP 2.99.2 Kiyi Nyowani Zvimiro (GIMP 3.0 Ongorora)
Yakashandurwa kushandisa raibhurari yeGTK3 panzvimbo yeGTK2, dhizaini ye iyo interface yakagadziridzwa zvakanyanya uye majeti matsva akafanirwa. Kune iwo dialogs, yevatengi-parutivi hwindo rekushongedza (CSD, yevatengi-parutivi kushongedzwa) yakashandiswa, mune iyo zita uye mawindo emafafitera asina kudhonzwa nemaneja wehwindo, asi nechishandiso pachacho.
Chinja kuGTK3 zvakare yakagonesa izere kuenderana neepamusoro pixel density density (HiDPI) uye yakagadzirisa matambudziko kana uchishanda pane diki uye hombe resolution yepamusoro. GIMP ikozvino inoremekedza masystem system masisitimu painopa iyo interface.
Yakagadziridzwa rutsigiro rwemberi zvekuisa zvishandiso senge kudhirowa mapiritsi uye penzura dzakareruka. Wakawedzera kugona kubatanidza michina yakadaro: kana muGIMP 2 piritsi racho raifanirwa kunge rakabatanidzwa risati ratanga chirongwa uye richiitwa zvakajeka mumasetimendi, ipapo muGIMP 3 zvese zvakareruka uye piritsi kana peni inogona kusunganidzwa chero nguva uye ichave chiripo chiripo kudhirowa.
Uyewo, kuwana kune epamberi kifaa marongero akareruka input. Vagadziri ava vaedzawo nema-on-screen gestures senge pini, zoom uye tenderera, asi chimiro ichi chinoiswa sechisiri-chekutanga uye hachisati chajeka kana chikaonekwa muGIMP 3.0.
Yakagadziriswa Tsigiro yemhando nyowani yeCSS-based theme Iyo inoshandisa yakajairwa GTK3 theme enjini uye inoita kuti zvive nyore kugadzirisa mamiriro kune izvo zvaunoda. Madingindira ekare haapindirani neGIMP 3.
Uyewo inotsigirwa rutsigiro rwekufananidzira icon seti inosimbiswa, izvo izvo zvino zvinongoerekana zvachinjisa kune yakatarwa kumberi uye kumashure mavara (kana uchichinja kubva pachiedza kuenda kune yakasviba modhi, hazvichadiwe kuti uchinje manyore icon yakatarwa).
Kuvandudza mhando yemhando yerima, iyo zvino inosanganisira windows yekushongedza zvinhu. Izvo zvinokwanisika kuitisa mwenje uye nerima sarudzo mune imwechete dhizaini dhizaini, pamwe neyekufananidzira uye ane mavara mapikigiramu panguva imwe chete.
Yakagadziriswa native rutsigiro rweWayland protocol. Pachine nyaya dzisingagadzirisike munzvimbo yeWayland senge kuyeuka kwendangariro, GUI anomalies, uye kuyera glitches, asi izvi zvichagadziriswa kana GIMP 3.0 yaburitswa sezvavanomakwa semabhuru ekuburitsa. Hazvisi zvese zvikamu zvisati zvashandurwa kushandisa maseru (xdg-desktop-portal).
Yakawedzerwa tsigiro kusarudza akawanda matete (multi-layer selection), iyo inoita kuti zvikwanise kusarudza zvidimbu zvakawanda panguva imwe chete uchishandisa musanganiswa wakasarudzika Shift + tinya kuti usarudze renji yematanho uye Ctrl + tinya kuti uwedzere kana kusarudzira materu ega kubva paseti.
ari mashandiro muGIMP anoshanda kune ese akasarudzika matara, Kukubvumidza iwe kufamba, boka, kudzima, kusanganisa, uye kuteedzera ese akasarudzika matara panguva imwe chete.
API nyowani yakarongedzwa yekugadzira plugins, izvo zvisingawirirane nema plugins ekare, asi zvinoenderana nevanogadzira hapana chinhu chakaomarara nezvekufambisa mapurogini aripo uye zvinotora maminetsi mashanu kusvika makumi matatu ekugadzirisa chinowoneka plugin (zvinyorwa zvekutama zvichapihwa nekuburitswa kweGIMP 5).
Render cache rutsigiro yaitwa, iyo inochengeta mhedzisiro yekukwirisa, pamwe nekunyepedzera nemavara, mafirita uye masiki.
Dhawunirodha uye isa
Zvekuisa, pasuru inowanikwa mune flatpak fomati mune ye flathub-beta repository.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Yakaburitswa GIMP 2.99.2, preview yeGIMP 3.0
Gimp yanga ichirasikirwa nechitima kwemakumi emakore. Krita iri nani kwazvo kunyangwe kana chinangwa chako chiri mufananidzo uye kwete kutora mafoto, asi iine maturusi mazhinji seGimp, mapoka akaturikidzana, G-Mic, yerudzi rutsigiro mbishi ... Uye zvedi haina chiya chinobatana chevacheche chinenge zvese Zvirongwa zveGTK.
Mukufamba kwangu kwebasa ini ndinogadzira uye ndoshandisa mafirita akakosha ane Darktable (kunyangwe iri nyore kugadzirisa GTK interface, iri rakanakisa chirongwa chekuvandudza chiripo, chiri nani kupfuura Chikamu Chekutanga kana Lightroom), uye ini ndinogadzira nematanho nematanda muKrita. Ndine Gimp nekuti iwe unofanirwa kuve nayo kana imwe yakatsaurirwa kugadzirisazve pasi peLinux, asi huya, ini ndinayo sekushongedza.
Uye ikozvino vaburitsa GTK 4, ndokuti, GTK 3 yatove tekinoroji isingachashandi uye Gimp haina kana kugadzikana chero kupfuura muGTK 2.
Chaizvoizvo, zvinonyadzisa zvakadii chirongwa. Vagadziri vayo vanofanirwa kutora Krita vogadzira forogo yekutora mifananidzo, asi vabatanidze vanhu vaKrita pachinzvimbo chekuenderera mberi kubheja pabhiza rinorasikirwa.
Iyo Linux ecosystem inoda mashoma hafu-apedza kunyorera, inoda mashoma asi akanaka iwo, anoita zvese zvinodiwa uye anoita zvese mushe; kubatana kunodiwa, kwete kupatsanurwa; shandira chinangwa chakajairika: kupa vashandisi dzimwe nzira dzehunhu hwakawanda kana zvirinani kupfuura idzo dzezvisikwa zvakavanzika uye vasori, uye kuti, kana uine zviwanikwa zvishoma zvevanhu, zvinogona kuwanikwa chete nekubatana nevanhu vari kushanda pamapurojekiti ane zvinangwa zvakafanana. .
Zvisinei ... Ipapo vamwe vacharamba vachibvunza mubvunzo wekusingaperi wekuti "gore reLinux desktop richauya riini" ...
Code Risk Analyzer: chengetedzo uye kutevedzera ongororo sevhisi kubva kuDevSecOps
Mushure meBookworm, Debian 13 ichave yakanyorwa zita rekuti Trixie. Bullseye yekutanga inotonhora, Ndira 12